Iwe unoda kuziva here yazvino American yekune dzimwe nyika mutemo? Iwe unoda kuziva nezve shanduko mukutenga uye kutumira kunze kwemitero yezvizoro muSouth Korea? Iwe unoda kuziva kutyisidzirwa kwe COVID-19 marara kuhupenyu hwepasirese? Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi. | Jesson
Iwe unoda kuziva here yazvino American yekune dzimwe nyika mutemo? Iwe unoda kuziva nezve shanduko mukutenga uye kutumira kunze kwemitero yezvizoro muSouth Korea? Iwe unoda kuziva kutyisidzirwa kwe COVID-19 marara kuhupenyu hwepasirese? Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi.
1. Mumutauro wake wekutanga wezvekunze nyika kubva paakatanga chinzvimbo, Mutungamiri weUS Joe Biden akazivisa zvisarudzo zvitatu: (1) United States ichagumisa rutsigiro rwayo pakurwiswa kweSaudi ku Yemen; (2) kumisa kubviswa kwemauto kuGerman; uye (3) kuwedzera huwandu hwevapoteri vanogamuchirwa neUnited States.
2.Forbes yakaburitsa runyorwa rwemakambani epamusoro makumi mashanu epasi rese blockchain muna 2021, kusanganisira Baidu, Ant Group, Ping Boka, Tencent, China Construction Bank uye Industrial uye Commerce Bank yeChina. Makambani eAmerica akaita seFacebook, Amazon, Citigroup neMasterCard akadonha pasi.
3.World Gold Council: mushure memwedzi miviri yakateedzana ye net net yegoridhe inobuda munaNovember naDecember 2020 (huwandu hwamatani 148.8), goridhe yepasi rose ETF inopinda yakasvika zvakare muna Ndira 2021, ine inopinda matani 13.8 (anenge US $ 1 bhiriyoni, an kuwedzera kwe0,4 muzana muzvinhu zviri pasi pehutariri). Parizvino, pasi rose goridhe ETF midziyo iri pasi pehutungamiriri inosvika mazana mazana matatu nemakumi matatu nematanhatu (mazana mazana maviri nemakumi masere nematanhatu emadhora), zvikamu zvina chete muzana pazasi pechinyorwa chematani 3915.8 ($ 244 bhiriyoni) yakamiswa kutanga kwaNovember.
4. Hurumende yeBritain yakaunganidza makambani akati wandei kuti vakurukure kuti vangabhadhara sei mutero webhizimusi repamhepo. Mutero unokurudzirwa kune vatengesi uye makambani eetekinoroji ane purofiti yakawedzera panguva yehosha yeCOVID-19, uye imwe chete "mutero wakanyanyisa wemubhadharo" urikuitirwawo. Zvirongwa zvemitero zvinogona kuitwa pachena muhafu yepiri ye2021.
5.French Federation of Beauty Enterprises: muna 2020, China yakava mutengesi mukuru pane zvigadzirwa zverunako zveFrance kekutanga. Muna 2018, China yaingova mutengesi wechinomwe mukurusa wekunaka kwekuFrance, ichikwira kusvika pachina muna 2019. Muna 2020, zvekutengesa zvekuFrance zvakatengeswa zvakazara 15.7 euros, zvichidzika 11.8 muzana kubva panguva imwechete mu2019. Panguva imwecheteyo, zvekushambadzira kutengesa ku China kubva kuFrance yakakwira ne20,7% kubva pagore rapfuura.
6.Korea Customs Office: muna 2020, zvigadzirwa zvekuSouth Korea zvekutengesa zvakakwira ne16.1% zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, kusvika US $ 7.57517 bhiriyoni. Kunze kwenyika kuChina kwakawedzera ne24.5% gore-ne-gore kusvika US $ 3.81 bhiriyoni, nepo kunze kwenyika kuUnited States, Japan neVietnam kwakawedzera ne21.6%, 59.2% uye 18.0%, zvichiteerana. Mugove weChina wemusika wekutengesa kunze weSouth Korea wakawedzera kusvika pa50.3% kubva pa46,9% muna2019.
7.Ndira 7 Kukadzi, vatano veCongo vakasimbisa kutanga kweEbola kumabvazuva kweCongo. Mumwe mukadzi akafa neEbola musi wa3 Kukadzi, mushure mekunzwa kusagadzikana kwemazuva akati wandei, ndokuzoenda kukiriniki kunoongororwa uyezve kuchipatara kunorapwa, asi akafa mhedzisiro yacho isati yabuda. Parizvino, hurumende iri kuteedzera zvese zvinobatika kudzora kuputika.
Musi waFebruary 8, Washington State Hospital Association yakaburitsa pachena kuti makumi ezviuru emasikisi eN95 akatengwa nezvipatara nemasangano emunharaunda aive emanyepo, angangoita mazana matatu. 000. Casey Shaw, mutungamiri uye mukuru mukuru weWashington State Hospital Association, vakati vazivisa zvipatara kuburitsa batch nhamba dzainge dzaonekwa semanyepo masiki kuitira kuti dzibvise mudura.
9. Maererano nenhau muna Kukadzi 8, nekupararira kwenoverengeka coronavirus, pasi rakagadzira zvakare marara mazhinji eCOVID-19. Boka renyika dzese rezvakatipoteredza rinofungidzira kuti mamirioni 1.56 emasikisi anoyerera achipinda mugungwa muna 2020, zvichipa njodzi kuhupenyu hwemugungwa. Nyamavhuvhu apfuura, vezvemhuka vakawana penguin yakafa kubva pamhenderekedzo yeBrazil uye vakawana yakazara N95 mask mudumbu mayo.